China Kunaka Agent Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Kunaka Agent ine hwema hwakasiyana siyana hunogona kubvumirwa.
Inoshandiswa zvakanyanya mumapurasitiki, zvigadzirwa zvepurasitiki, zvigadzirwa zverabha.
Iyo Kunaka Agent inogona kushandiswa zvakanyanya mumapurasitiki, zvigadzirwa zvepurasitiki, zvigadzirwa zverabha, matoyi epurasitiki, zvinonhuwira zvichisimbisa, shangu, chipanji, mhizha, zvemukati memotokari, zvinyorwa, zvinyorwa, zvekushandisa zvemumba zvikamu pamwe nehutano, runako uye cosmetic kavha system yepurasitiki indasitiri, gadzira icho chigadzirwa pachacho chakasarudzika maficha kuti chiwedzere kukwikwidza mumusika, asi zvakare wedzera mukana weyakawedzerwa kukosha zvigadzirwa.
Tinogona kupa zvinonhuwira zvakasiyana seizvi:
Maruva zvikamu: Jasmine, inotapira-inonhuhwirira osmanthus, rose, lavender, vanilla, gardenia, Magnolia, sitirobheri zvichingodaro.
Zvibereko zvezvikamu: Maapuro, mandimu, sitirobheri, mapichisi nezvimwewo.
Vamwe: nyama yakagochwa, Chokoreti, mindi, mukaka munuhwi.
Ongorora: mutengo uchapihwa sekuenderana nezvinodiwa nemutengi pane zvinonaka.
Nemitengo inonzwisisika, inoshanda nguva yekugadzira uye yakanaka mushure-yekutengesa sevhisi, isu takunda zvakanyanya kurumbidza vatengi vekunze '. Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kuSouth East Asia, Middle East, Europe nedzimwe nzvimbo.
Corporate chinangwa: Kugutsikana kweVatengi 'chinangwa chedu, uye nemoyo wese tariro yekumisikidza marefu-mazwi hukama hwakabatana pamwe nevatengi kuti vabatanidze musika. Kuvaka kupenya mangwana pamwe chete! Yedu kambani inoona "ZVINOTAURWA NDIYO CHOKUTANGA UYE purofiti ICHOKWADI" seyedu inotungamira ideology. Isu tinotarisira kumisikidza yakafara batanidza uye kushandira pamwe nevamwe vatengi kwekuwirirana kukura uye mabhenefiti. Tinogamuchira vangangoita vatengi kuti vatibate.
Pashure: Fekitori Yemahara sampuro Inomesa Nucleator BT-9806 - PET Inosimudza Agent BT-TW03 - BGT
Zvadaro: Kujekesa Mumiriri BT-808